Ndị ahịa nwere ike: kedu ihe ha bụ, otu esi achọta ha, otu esi adọta ha | Ozi ECommerce
Ọ bụrụ na ị nwere azụmaahịa, ọ bụrụ ụlọ ahịa anụ ahụ ma ọ bụ eCommerce, n'ezie enwere otu ihe na -eme ka ị na -amụ anya kwa ụbọchị: inweta ndị ahịa. Ndị a adịghị nfe dịka anyị nwere ike iche, mana ọ bụ ogidi siri ike maka azụmaahịa. Ọ bụrụ na nke a kpụrụ nke ọma, nkwụsi ike na ụlọ ọrụ enweghị mgbagha; mana ọ bụrụ na ha adịghị ọtụtụ, ndụ ụlọ ahịa gị nwere ike nọrọ n'ihe egwu. Na, maka nke a, ị ga -achọ ndị ahịa.
Ma, Kedu ihe nwere ike ịbụ onye ahịa? Kedu ụdị dị? Onye ahịa nwere ike ịmalite azụmahịa? Ọ bụrụ na ị na -ajụ onwe gị ajụjụ ndị a niile, oge eruola ka anyị nye gị azịza.
1 Kedu ihe nwere ike ịbụ onye ahịa
1.1 Ndị ahịa nwere ike bụrụ ezigbo onye ahịa
1.2 Onye ahịa nwere ike bụrụ onye ahịa ezubere iche
2 Ụdị ndị ahịa nwere ike
3 Otu esi achọ ndị ahịa
4 Otu esi ejide ha
Kedu ihe nwere ike ịbụ onye ahịa
N'ụzọ dị mfe ma doo anya, anyị nwere ike ịsị na onye ahịa nwere ike bụrụ onye nwere ike bụrụ onye na -azụ ma ọ bụ onye ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa nke ị nwere maka ọrịre. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ ga -abụ onye ọ bụla na -eji ma ọ bụ zụta ngwaahịa gị.
Ugbu a, ntozu ntozu nwere ike igosi na ha azụtabeghị ihe ọ bụla, mana ha nwere ike nwee mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ ị na -enye, na -aghọbeghị ezigbo onye ahịa.
Anyị na -enye gị ihe atụ. Were ya na ị hụla akwa dị ịtụnanya na ụlọ ahịa maka agbamakwụkwọ ị nwere n'ime ọnwa atọ. Ọ nwere ike bụrụ na ọ masịrị gị nke ukwuu nke na ị chọrọ ịzụ ya, mana ebe ọ ka nwere nnukwu ụzọ ị ga -aga, ị maghịkwa ma n'ime otu ọnwa ị ga -efunahụ ma ọ bụ felata, ị chere. Agbanyeghị, ị nwere ya na nlele gị. Nke ahụ nwere ike tozuo oke dị ka onye ahịa maka na ha bụ onye nwere mmasị na uwe ahụ, mana azabeghị ya.
N'ozuzu, Ndị ahịa nwere ike bụ ndị nwere mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị mana ha emechaghị nzọ ahụ, na -ejigide nsogbu dị iche iche (ikekwe ọnụahịa, echiche ndị ahịa ndị ọzọ, wdg).
Ndị ahịa nwere ike bụrụ ezigbo onye ahịa
Tupu anyị enye gị ntule izizi nke nnukwu ọdịiche dị n'etiti onye nwere ike ị nweta ahịa na ezigbo onye ahịa. N'ụzọ bụ isi, ha abụọ bụ ndị nwere mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị na -ere. Ma nke mbụ emechachaghị ihe ọ zụrụ, ebe nke abụọ emecha.
Anyị nwere ike ikwu nke ahụ Ntughari site n'aka onye ahịa nwere ike ịbụ onye dị adị dị mfe dị ka ikpebi ịzụta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ.
Onye ahịa nwere ike bụrụ onye ahịa ezubere iche
Ọdịiche ọzọ dị n'etiti echiche abụọ nwere njikọ chiri anya na eCommerce bụ onye ahịa nwere ike na ebumnuche ya. Ọ bụ ezie na n'ọnọdụ nke mbụ onye ọ bụla nwere ike, ebumnobi na -akọwapụta otu nke ga -ezute usoro ọnọdụ akọwapụtara (afọ, mmekọahụ, ihe ụtọ, ntụrụndụ ...).
Nke a bụ ihe ị ga -eburu n'uche n'ihi na ọtụtụ oge, mgbe anyị na -eme atụmatụ ịre ahịa, anyị na -ekpebikarị onye ahịa lekwasịrị anya; Mana oge ụfọdụ nke a abụghị nke ziri ezi, ọ bụ ebe ahụ ka ndị ahịa nwere ike bata, onye ga -enye gị echiche ma ị tụọla ebumnuche (maka mkpọsa gị) ma ọ bụ.
Ụdị ndị ahịa nwere ike
Ị ma ihe dị ụdị ndu anọ? Onye ọ bụla n'ime ha na -enye gị igodo iji mata ha, ọ dịkwa mkpa ịmata njirimara nke ọ bụla n'ime ha:
Maka ugboro ole ịzụrụ ya. Ha bụ ndị nwere ike zụta nke ukwuu, ndị na -eme ya obere oge, ma ọ bụ ndị na -azụta mgbe niile. Dị ka ọ na -adịkarị, ihe dị iche na nke ọ bụla n'ime ha bụ na mmadụ na -eleta ụlọ ahịa ahụ na -aga n'ihu, mgbe ụfọdụ ọtụtụ oge, onye ọzọ na -eleta ya mana na -etinyekwu oge na, n'ikpeazụ, onye na -azụta mgbe ụfọdụ, na -eleta ya naanị mgbe ọ chọrọ ihe.
Site na oke ịzụta. Nke ahụ bụ, site na ọnụọgụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị na -eri ma ọ bụ mkpa maka azụmahịa gị.
Site na mmetụta. Ha bụ ndị ahịa nwere ike, ọ bụ ezie na ha abụghị ezigbo ndị ahịa (ụfọdụ n'ime ha), na -emetụta mkpebi ndị ọzọ ime ya.
Site na profaịlụ gị. Ha bụ ndị kacha nso profaịlụ ndị ahịa eburu n'uche. Nke ahụ bụ, nye ndị nwere ike nwe nnukwu mmasị na ngwaahịa, ọrụ, wdg.
Otu esi achọ ndị ahịa
Site na nkọwa nke anyị nyeburu gị, onye ahịa nwere ike ịbụ onye ọ bụla. Mana n'eziokwu nke a abụghị otu. Dịka ọmụmaatụ, were ya na ị nwere eCommerce yana ị na -ere ihe ụmụaka ji egwuri egwu. Onye ahịa gị lekwasịrị anya ga -abụ ezinụlọ nwere ụmụaka. Mana o doro anya na onye ahịa nwere ike ọ gaghị abụ, dịka ọmụmaatụ, otu onye na -enweghị ụmụ na onye na -enweghị mmasị na ihe egwuregwu ụmụaka.
Nke ahụ bụ, ịchọ ndị ahịa nwere ike, ị ga -ama ndị na -ege ntị ị na -agwa okwu, nye ndị nwere ike nwee mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Mara ihe ahịa lekwasịrị anya gị bụ. Nke ahụ bụ, njirimara na -akọwa ya yana ndị ahịa nwere ike nwee mmasị n'ihe ị na -ere ma ọ bụ na -eme.
Debe usoro ịzụ ahịa iji rute ndị na -ege ntị. Nke a nwere ike bụrụ ihe kacha mkpa, yana nkewa nkewa, ka ọ nwee ihe ịga nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, kewaa site na igwe mmadụ, ala, mgbanwe omume, wdg.
Nyochaa ọwa nkwukọrịta na weebụsaịtị. Mgbe ụfọdụ ọnụ ọgụgụ nke weebụsaịtị gị, yana netwọkụ mmekọrịta, ga -agwa gị ndị na -ege ntị na ị na -amalite inwe mmasị, nke kwesịrị ka ọ dabara na ndị na -ege ntị lekwasịrị anya nke ị kanyere akara. Mana oge ndị ọzọ nke a nwere ike daa, ị ga -edegharịrị usoro gara aga.
Otu esi ejide ha
Ozugbo ịchọtara ndị ahịa, ihe kacha gị mkpa bụ na ndị ahụ nwere mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị na -ewere nzọụkwụ wee bụrụ ezigbo ndị ahịa. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha na -azụrụ gị.
Maka nke a, ọ dị mkpa ịrụ Nchọpụta iji chọpụta ihe kpatara ndị a ji ala azụ mgbe ha na -azụ ihe. Ọ nwere ike ịbụ n'ihi ọnụ ahịa ya? N'ihi echiche nke ngwaahịa gị? Ma eleghị anya, àgwà nke ihe ị na -enye? Maka ụgwọ mbupu ma ọ bụrụ na ị na -aga ịzụta n'ịntanetị?
Ị ga -amatarịrị ihe ọ na -eme ndị ahịa ahụ n'ikpeazụ ka ha ghara ịhazi usoro ha chọrọ.
Anyị agaghị agwa gị na ọ dị mfe ịchọpụta, n'ihi na ọ bụghị ọtụtụ ndị na -anwa anwa ịnye ozi ahụ, mana ọ bụrụ na ị nwere ike, gbalịa nweta ya. N'ime ụlọ ahịa anụ ahụ ị nwere ike jụọ ajụjụ ozugbo; Mana n'ime ịntanetị ihe ị nwere ike ime bụ izipu ozi -e (ọ bụrụ na ị nwere otu) wee jụọ ihe kpatara na emezughị ịzụrụ ya. Ọ bụrụ na ị nwere obiọma ma mee ka ọ ghọta na ọ dị mkpa ka ị nwee echiche ya yana na ịchọrọ ịma ihe ị nwere ike ime iji mee ya onye ahịa gị, ị ga -enweta nkwado nke onye ahụ (yana ụfọdụ ozi bara ezigbo uru).
Ozugbo inwetara ozi ahụ, nzọụkwụ ọzọ bụ kọwaa atụmatụ maka ndị ahịa ahụ nwere ike. Ị nwere ike kewaa ha dịka mkpa nke otu ọ bụla si dị, mana ị na -ahụ na enwere ike nwee ihe ịga nke ọma.
Ọganiihu nke atụmatụ ndị a ga -adabere na nyocha yana onye ọ bụla. Ọ bụrụ na ị dozie ihe mgbochi gbochiri ha ịhazi ịzụrụ ihe, ekwesịghị inwe nsogbu n'oge ahụ ịzụta (belụsọ na ha achọghịzi ngwaahịa ahụ ma ọ bụ zụrụ ya n'ụlọ ahịa ọzọ).
Ọ meela ka ị ghọta nke ọma ihe ndị ahịa nwere ike ịbụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ndị ahịa nwere ike